Macluumaad kala duwan oo ku saabsan ragga | Ragga leh Qaabka (Bogga 3)
Maxaa xiirid ku habboon maqaarkaaga?
Go'aanka ugu horreeya marka la dooranayo xiirashada, ma aasaas, mandiil gacanta ama mandiil koronto? Inta badan…
Waa maxay daryeelka aan u baahanahay nooca maqaarkayga?
Nin kastaa wuxuu leeyahay baahiyo gaar ah oo maqaarka ah sidaa darteedna wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah iyadoo loo eegayo dhibaatadaas uu ...
Dib u helida kabaha badda
Kabaha badda ee caadiga ah ayaa si xoog ah kula soo laabtay guga xagaaga 2013, iyagoo soo bandhigaya asalka iyo iskudhafka midabada iyo qalabka
Ciyaar tetris si aad u wanaajiso sirdoonka
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista ka socota Jaamacadda California, ciyaarta tetris waxay kuu oggolaaneysaa inaad ballaariso awoodaha maskaxda, sida isuduwidda iyo xusuusta, iyo sidoo kale inaad yareyso heerarka buufiska.
Midabada hore ee guga 2013
Waxay umuuqataa in cimiladii fiicnayd ay aakhirkii timid inay sii jirto. Marka waxaan ugu dambeyntii ku raaxeysan karnaa qorraxda iyo ...
Muraayadaha indhaha oo ku habboon qaabka wajigaaga
Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa u noqon doona qalab muhiim u ah muuqaalkeena wixii hada ka dambeeya. Taasi…
'Kilties', oo ah kii ugu dambeeyay ee kabahaaga loo habeeyo
Shirkadda Ingiriisiga ah ee Olvier Sweeney waxay soo jeedinaysaa inay si kale u taabato kabahayaga Kilties, carrabadan asalka ah.
T-shaati-guga guga, 10-ka ugu cadcad
Guga ayaa umuuqda inay dukaamada ka buuxiyeen midab, isla markaana eegaya waxa funaanadaha laga iibsado ...
5 cadar kaamil ah Maalinta Aabbaha
Talaadada soo socota, 19-ka Maarso, waa Maalinta Aabbaha oo aadan weli u iibinin wax hadiyado ah? Waa maxay…
4 jaakad suede ah si loo joojiyo jiilaalka qaab ahaan
Waxay umuuqataa, waana xoojinayaa waxa ay umuuqato, in cimiladu go'aansatay inay hagaagto wiig caan ah kadib. Waa wakhti, markaa, ...
4 kabo laba jibbaar ah oo kuxiran miisaaniyadaada
Waqti badan ayey qaadatay markii aan calaamadeynay dusha sare ee qaabkan, maantana waxaan haysannaa mid ka mid ah dhammaan jeebbada. Maaha…
Muuqaalka Maanta: Cimilada wanaagsan, muuqaalka aan rasmiga ahayn
Isniinta markale? Horeba? Laakiin, laakiin ... haddii dhowr saacadood ka hor ay ahayd Jimco. Sikastaba, uguyaraan waxay umuuqataa in ...
Jiid & Bear ku celcelinta, oo ku garaac, Vespa xilli ciyaareedkan
Xagaagii la soo dhaafay Pull & Bear ayaa la soo baxay kooxdii ugu badneyd ee Talyaani ah iyadoo wadashaqeyn guuleysatay leh; mid leh Fiat iyo ...
HUGO Cas, udgoon ka gudubta xadka
Haddii in yar ka hor, laga bilaabo TenerClase waxaan gebi ahaanba la dhacsan nahay 'Just Different', oo ah udgoonkii jabiyay qorshayaasha, tan ...
E-SAMAYN Cidhiidhiga ragga
Si aad sidoo kale u isticmaali karto sharabaadada, halkan waxaan ku tusaynaa kuwa ka yimid E-MANcipate oo leh qaabka kuugu fiican ee kaladuwan.
Cunnooyinka kiciya koritaanka guska
Ragga badankood waxay rabaan guska weyn, kaas oo cuntooyinka qaar ee kiciya koritaanka guska ay waxtar weyn yeelan karaan.
LACOSTE L! VE LAB, soo qaado dhinacaaga magaalooyinka ugu badan
LACOSTE L! VE waxay rabtay inay hal-abuurto oo ay soo saarto dhinaceeda ugu magaalo iyo teknolojiyad. Kadib soo bandhigidiisii ​​intii lagu jiray Toddobaadka ...
Maamulaha PS4 oo leh shaashad taabasho
Dadka iyagu jecel qalabka kombiyuutarka ee fiidiyowga cusub, halkan waxaan ku tusaynaa aaladda cusub ee Sony oo leh shaashad taabasho ah.
Koobabka Zara, haa ama maya?
Xan ka sheegista websaydhka Zara, oo naqshaddiisa cusub aanan hubin haddii aan jeclaaday iyo in kale gaar ahaan ...
Dheelitirka cusub wuxuu ka noqdaa 574, nooca cusub ee caadiga ah
Habka cusub ee Balance 'retro' ayaa wali ah furaha guushooda weyn, taas, iyo waxa ay xiran yihiin ...
Kabaha Baabuurta ayaa faraha ka baxay iyadoo leh midabka rootidiisa
Soo-jeedimaha xilliga gu'ga-Jiilaalka ee soo socda ee 2013 ee ka imanaya shirkado badan ayaa billaabaya inay yimaadaan dukaamada. Maanta waxaan ka hadlaynaa, ...
Levitate, kabaha tuubada gudaha ee Prada
Kabaha qaarkood waxay caan ku yihiin wadada ciyaaraha fudud marka loo eego socodka wadada, waa nooca loo yaqaan 'Levitate by Prada', oo leh tuubbo gudaha ah oo aad u adag in Nike ay si wanaagsan ugula soo saxiixan karto mid ka mid ah moodelladooda orodka ah.
Raggaas shukaansiga badan ee jecel inay xirtaan saacado wanaagsan, waxaan ku tusineynaa dhamaadka-sare ee TagHeuer.
Jumper-ka ugu badan ee Kirismaska ​​laga soo bilaabo Abercrombie & Fitch
Sawirka caadiga ah ee qoyska kirismaska ​​ee agagaarka dabka leh oo leh muraayadaha shaambada, joornaalada nougat, hadiyadaha iyo eeyga koofiyad qosol leh waligood gabi ahaanba ma dhameystirmi doonaan haddii ugu yaraan mid ka mid ah ragga ku jira uusan xirneyn funaanad jilicsan. Adiguna waad ogtahay.
Dabaasha waxay la soo noqdeen mokaaskadahooda caagga ah
Iyo, waxaan leeyahay, macnaha noocee ah ayaa tan loo adeegsadaa? Si aad ugu baxdo wadada xagaaga qorshe caadi ah, run ahaantii? Mise sidii mudane oo kale ayaad xeebta ugu socotaa? Ma garanayo, kaliya ma aanan helin ujeedka kabaha caaggan, runtii.
Muraayadaha Cabsida iyo Nacaybka ee Las Vegas, oo ay soo saartay Shirkadda Vintage Frames
Garyaqaan ahaan waxaan kugula talinayaa inaad kireysato wax beddeli kara oo aad u dhaqso badan ... »Aad u khayaaliga ah 'Cabsi iyo karaahiyo Las Vegas', shaki la'aan. Hadda, laga bilaabo gacanta Vintage Frames Co. iyo sababta oo ah heesaaha 'Lil Wayne' waxaan heleynaa xoogaa muraayado ah oo dhiirrigelinaya kuwa uu Johnny Depp ku xiray filimka. Degdeg, waxaa jira 20 oo keliya.
Dharka V-qoorta ee Purificación García
Si loo abuuro muuqaalada ugu wanaagsan ee lab, wax ka fiican ma jiro Purificación Garcia v-neck sweaters for this season.
Zara waxay u dabaaldegeysaa sannad-guuradii 50aad ee Dhagxaanta Rolling iyadoo la siinayo funaanado
Mick Jagger iyo dadkiisa ayaa u dabaaldegaya, The Rolling Stones ayaa 50 sano jirsanaya wax aan badnayn iyo wax ka yar toona Zara ma dooneynin inay seegto fursada ah inay lacag ku sameysato waxayna na siisay seddex funaanadood oo lagu sharfayo kooxda taas oo ka farxin doonta taageerayaasheeda iyo kuwa raadinaya qaab gantaal.
Haddii aad rabto inaad dhammaystirto muuqaalkaaga, waxba kama fiicna jijimooyinka moodada Miansai.
4 muraayadaha indhaha oo aad rabto inaad isku laabto
Miyaadan weli ku soo biirin isbeddelka muraayadda muraayadaha indhaha Haa, waan ogahay in hadda la bixitaanka muraayadaha indhaha aysan habooneyn, laakiin ugu yaraan waad keydin kartaa iyaga oo qaadaya boos yar illaa qorraxdu ka soo baxdo. Bal u fiirso afartan soo jeedin.
Classical Cimilada qabow, Vans xargaha xiirashada xilliga qaboobaha
Aan aragno cidda ku dhiiranaysa, iyada oo ay jirto cimilo sumcad xumo leh oo maalmahan samaynaysa, si aan ugu baxno waddooyinka iyaga oo xidhan Vans. Waan ogahay in shaqaalaha shirkaddu ay karti leeyihiin, iyo sidoo kale Vans, taasi waa sababta ay hadda u soo bandhigeen ururintooda cusub ee Qaboojinta Cimilada. Ma jiro jiilaal iska celin kara.
Marooyin gacmeedyo iyo garbasaarro by Adolfo Dominguez
Si qoortaadu u kululaato xilliga jiilaalka, wax ka fiican cowska Adolfo Dominguez iyo maro-gacmeedyadiisa.
Louboutin waxay ka tagtaa istuudiyaha guriga iyada cusub ee Vikram
Shabeel maahan, tartan ma ahan, maro jilicsan maahan, faahfaahinta dahabka ma ahan, maahan calaacalaha, ma ahan esparto, xitaa marooyin. Waxa kaliya ee leh taabashada eccentric waa daboolka suulka maqaar patent. Tani waa sida Vikram cusub ee ka socda Christian Louboutin ay yihiin.
Jack & Jones Bootsyo Xul Ah
Halkan waxaan ku tusineynaa qaabka ugu fiican ee kabaha cuntada sida shirkadda Jack & Jones oo leh Xullo.
White Bakayle Saloon, edition kooban ee Jack Daniel ee
Jack Daniel's wuxuu u dabaaldegayaa sannad-guuradii 120-aad ee ka soo wareegtay halyeeygii White Rabbit Saloon oo leh daabacaad gaar ah. Hada waa la iibinayaa !!
3 funaanado denim oo kala duwan, laga bilaabo Zara
Waxay umuuqataa inay adagtahay in jiilaalka lagu qaato adoon, uguyaraan, funaanad denim ah.
Bal u fiirso seddexdan soo jeedin ee waxyar ka duwan kuwa ay na siiso Zara
Ray-Bankii ugu caansanaa ee hadda ku jira qaab isku laaban
Ray-Ban waa astaanta moodada. Haddii aan la qabsan jirnay quraaradihiisii ​​caadiga ahaa ee Aviator iyo halyeeygiisa Wayfarer, hadda wuxuu imanayaa qaabkiisii ​​muuqaalka ee ugu badnaa. Noocyadiisa isku mid ah ee muraayadaha isku laabma.
Labada nooc midkee doorbideysaa?
Miiro qolofta biyaha kulul
Halkan waxaan uga hadleynaa buskud weyn oo Maango ah maalmahan dayrta.
3 fikradood oo lagu darayo kaarigan
Cardigans waa mid ka mid ah jaakadaha lagama maarmaanka u ah deyrta-jiilaalka. Waxay u muuqdaan kuwo hagaagsan bilaha ugu horreeya ...
«Alpine» funaanadaha jiilaalka, fasallada ma dhintaan
Marka jiilaalku soo dhowaado, funaanadaha waxay bilaabaan inay door weyn ka qaataan muuqaalka. Waxay yihiin dhar raaxo leh, ...
3 siyaabood oo loogu daro kabahaaga Chelsea
Waxaa la gaadhay waqtigii la bilaabi lahaa in kabaha loo beddelo kabaha, waana marka la yimaado xilliga Dayrta ...
Jaakadaha lagama maarmaanka u ah muuqaalada nuska, maxaad ugu jeceshahay?
Maaddaama ay maalmaha sii socdaan oo aan sii qoto dheeraynno Oktoobar, qolalkayagu waxay bilaabaan inay maraan isbeddeladaas ...
Jilayaasha qubeyska ee Hugo Boss
Haddii aad rabto inaad daryeesho maqaarkaaga ugu badnaan, ma jiro wax ka fiican jel qubeyska Hugo Boss.
Liin dhanaan, ma u malaynaysaa inay adag tahay in la isku daro midabkan?
In kasta oo ay kuguula muuqan karto geesinimo, oranji waa ikhtiyaar fantastik ah ee Fallkan maadaama ay ka tarjumeyso duruufaha dabiiciga ...
Toddobaadka Fashion-ka ee Paris, bartamaha dayrta iyo ka fekeridda xilli-ciyaareedka soo socda
Bisha Sebtember marwalba waxay ahayd bishii catwalks, tii ugu dambeysayna waan awoodnay ...
U fiirso muuqaalka Daniel Craig oo noqo James Bond laftiisa
Filimkii ugu dambeeyay ee James Bond, Skyfall, kaas oo wakiilka qarsoodiga ugu caansan ...
Halloween Halloween MAN Iska jir naftaada, iskudayida cusub ee Jesús del Pozo
«Habeenku wuxuu leeyahay ur u gaar ah, miyaad urisaa? Ma maqaar labaad baa, mise waa tan koowaad? Apple Martini ayaa soo muuqday ...
5 boorsooyin gacmeedyo aad u kala jaad ah oo aadan tabi karin
Boorsooyinka gacantu waa kuwo aad waxtar u leh, gaar ahaan xilliyada ay jiraan waxyaabo badan oo aan sidno ...
Cagaarka ciidanka, midabka Dayrta
Way cadahay in cagaarka milatari uu yahay midabka boqorka ee Dayrtaan waxaana jira kaliya ...
3 wuxuu raadiyaa jooniskaaga, sidee joonisyada aad xirtaa?
Xitaa ma aqaano inta aan ku haysto qolkayga, laakiin waxa aan hubo waa in surwaalka ...
Ka joojiyayaasha Jiilaalka-Jiilaalkan, ma xiraneysaa ganaaxyaal?
Ma xiran tahay ganaaxyaal? Ma ogtahay goorta la xidhayo iyo sida laysugu geeyo? Qalabka noocan ah ee ragga badani waa ...
Maaliyadaha Corduroy iyaga loogu talagalay
Ma jiraan wax ka fiican shaatiyadaha loo yaqaan 'corduroy fun' si loogu daro xilligan dayrta loona abuuro muuqaal cusub, taasi waa sababta halkan aan ugala hadalno iyaga.
Prada Levitate Wingtip Kabaha
Haddii aad rabto inaad noqoto tan ugu hadda, halkan waxaan ku tusaynaa kabaha noocan oo kale ah, oo isku dhafan kabo iyo kabo isboorti.
Hoyga, alaabada quruxda badan ee ragga
Sida had iyo jeer dhacda hadda, waxaa jira rag badan oo naftooda daryeela, waana taas sababta aan ugala hadalno alaabada quruxda guryaha Homem iyaga loo sameeyo.
Shaashadda kuraasta diyaaradaha
Haddii aad rabto inaad safarto oo aadan rabin inaad caajiso gabi ahaanba, maxaa ka fiican inaad ku duusho diyaarad leh teknoolojiyada ugu fiican, maadaama hadda ay leeyihiin shaashado kuraasta.
Versace Buluug Buluug ah
Halkan waxaan maanta kaala hadlaynaa carafta weyn ee ragga ka timaadda Versace, ragga oo dhan.
Kawasaki KS 450 F mootada buuraha cusub
Waxaan ku tusineynaa maanta mooto weyn si aad buurta u kacdo oo aad ugu raaxeysato wadada, Kawasaki.
Sida loo aqoonsado haweeney qanacsan
Si aad ku ogaatid kaliya socodka haddii haweeneydu ku qanacsan tahay waa inaad heysataa talooyin taxane ah oo aan halkaan ku siineyno.
Kabaha leh cagaha midabada leh
Halkan waxaad ku haysataa kabo wanaagsan oo xilligan soo socda leh oo leh cirbado midab leh oo dhallinyaro ah.
Halkan waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah dharka ugu wanaagsan ee ragga ee ka socda shirkadda Kalenji, si aad u raaxaysato mar walba.
Dhar gacmo-gacmeedyo khaas ah
Halkan waxaan ku tusaynaa naqshadaha ugufiican ee kiisaska laptop-ka shaqsiga ah, si had iyo jeer loo ilaaliyo.
Sidee loo sameeyaa koofiyadda mootada
Halkan waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka la raacayo soo saarista koofiyadda mootada, si amniga waddadu u ahaado mid la isku halleyn karo.
Sida loo diyaariyo salad leh foie iyo tufaax tufaax ah
Waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo saladh macaan oo loogu talagalay qashin fudud haddii aad marti ku tahay guriga hada hada waa xagaaga oo waa kulul
Halkan waxaad ku haysataa qaar ka mid ah saacadaha ugu fiican uguna asalka ah suuqa, si aad uga yaabiso qof walba haddii aad ku haysatid guriga ama curcurka.
Sida loo xirto kabo isboorti midab leh
Muddooyinkan dambe waxaan aragnaa sida kabaha ay ugu qaataan magac weyn muuqaal ahaan waana qayb muhiim u ah ...
Koofiyadaha iyo buroolaha xagaaga
Koofiyadaha ugu fiican iyo kuwa caloosha ku jira si aad ugu fiirsato muuqaalka xagaaga ee ugu wanaagsan markasta, maxaa yeelay moodadu had iyo jeer way kula socotaa.
Shaatiyada daabacan, waa waajib xagaagan
Caadi ahaan marka aan ka hadlayno shaatiyada daabacan, waxa ugu horreeya ee aan ka fikirno waa laba jibbaaran iyo karbaashyo, ay fududahay in ...
Hem, haa ama maya?
Saraawiisha Hemmed ayaa si aad ah caan u noqday oo rag iyo dumarba ay xidhaan. Gudaha…
Xirashada xarigga shaatiga gudihiisa, isbeddel cusub?
Waxay ku jirtay dhowr maalmood boggaga iyo shabakadaha bulshada. Waxay yiraahdaan iyadoo la arko seddex jeer, meelo kala duwan, wax ...
5 siyaabood oo loo xirto blazer plaid
Blazers waa dhar aad u faa'iido badan oo naga caawin kara inaan siino xoogaa rasmi ah ...
Muraayadaha alwaaxda xagaaga
Markii hore maanaan rumaysan laakiin waa run, waxaa jira muraayadaha qoryaha! Nooca Shwood waa ...
2 dabiici ah kadib xiirista daryeelka maqaarkaaga
Hadaad jeceshahay inaad wajiga xirto gadh la'aan maalin kasta ma lihid xulasho aan ahayn inaad xiirto ...
Martin Miller's wuxuu soo bandhigayaa "The Perfect Gin Tonic"
Maalmahan ginsku waa mid moodada badan, oo xitaa ay ka soo baxaan dhagaxyada hoostooda, waxaan dareemay sida ...
Swatch Gent ayaa daawanaya iyaga
Waxaan ku tusaynaa khadadka cusub ee saacadaha ragga ee loo yaqaan 'Swatch Gent', oo leh midabbo soo jiidasho leh iyo qaabkii ugu dambeeyay.
Si aad ugu raaxeysato gudaha iyo dibaddaba waxaan ku tusaynaa nigiskii asalka ahaa ee ugu sarreeyay halyeeyada shirkadda Diesel.
Dharka casaanka ah ee Sannadaha Cusub
Habeenka ugu dambeeya sanadka marwalba waxaa ka buuxa dhaqamo iyo dhaqanno lagu soo jiito nasiib wacan. Iyo mid ka mid ah ...
Hadiyadaha: jijimooyin iyo isku xirayaasha
Jijimooyin iyo shaashad isku xidhka hadiyad ahaan loogu talo galay Kirismaska
Dharka hurdada ee ragga
Halkan waxaad ku haysaa moodello waaweyn oo ah dharka jiifka ee ragga, oo leh nashqado asal ah sidaa darteed joogitaanka gurigu ma aha oo kaliya daqiiqad kale.
5-ta xiriir ee ugu qaalisan uguna qiimaha jaban
Hadda oo aan dhammaanteen u maleyneyno in xirmooyinka qaanso-soo-noqoshada ay dib ugu soo laabteen moodada (Uma maleynayo inaan waligey faraxsaneyn ...
5ta saac ee isboortiga ugu fiican
Maalmo ka hor waxaan ku tusnay ururinta cusub ee Jeremy Scott ee loo yaqaan 'Swatch', oo ah aruurin wax ku ool ah oo kaliya ku habboon ...
Qaabka Ingiriiska ayaa ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay. Waxay leedahay xarrago, muuqaal isla markaana isla markaa taabasho aan rasmi ahayn oo wacaya ...
Maaskaro guriga lagu sameeyo si lugaha loogu waraabiyo
Cagaha ayaa ah kuwa weligood lagu ilaaway daryeelka jirkeena. Waxaan la qabsanay in aan wajiga iyo jirkeena qoyo….
Kaamirada sawirka USB
Haddii aad rabto inaad ka yaabiso saaxiib ama qaraabo ama aad ka iibsato kan ugu hadda jira ee pendrive, halkan waxaad ku haysataa mid qaab kamarad ah.
Muraayadaha cusub ee Marc Jacobs
Naqshadeeyaha caanka ah Marc Jacobs wuxuu soo bandhigayaa soo-jeedinta cusub ee shirkadda magaceeda lagu xardhay. Kiiskan,…
Dharka kirismaska ​​2011: dhididka kirismaska
Waxaa jira wax yar iyo ka yar oo haray, waxaa jira dad badan oo naga mid ah oo durba bilaabay dukaamaysiga Kirismaska. Dukaamada waxaa ka buuxa ...
Kabaha cusub ee 'Convers DC Comics'
Waxay umuuqataa in iskaashiga udhaxeeya Converse iyo DC ee kabaha isboortiga majaajillada daabacan ay sifiican u shaqeeyaan,…
Qaabka dhagaxa. Waad dhiirantahay
Waxaa jira tan oo siyaabo ah oo aad u ruxdo qaabkaaga adigoon aad u xad dhaafin. Tusaale ahaan: Kuwaas ...
Manicure for men? Dabcan!
Dunida quruxda ayaa gabi ahaanba albaabada u furtay qeybta ragga. Ilaa goor aan fogayn kii ...
Dhagaha dhageysiga moobiilka
Dib-u-dhaca ugu badan ee xilligan wuxuu yimaadaa suuqa, sameecadda moobiilka ee qaab taleefan duug ah, wax hal-abuur leh oo cid walba ka yaabin doona.
Soo hel muuqaalka Rafa Medina
Muuqaalka mid ka mid ah ragga ugu quruxda badan dalkan ayaa yimid, xaasidnimada Rafa Madiina. Caadi ahaan dhammaan ...
Dharka cusub ee Goose
Inkasta oo wax soo saarka xiddigga shirkadda El Ganso laga yaabo inuu kabihiisa noqdo, haddana sumaddu waxay samaynaysaa sharad weyn ...
Kabaha Munich, sheekooyinka cusub dayrta-jiilaalka 2011-2012
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee kabaha dalkeena ayaa soo bandhigaya soo jeedinteeda cusub. Munich horeyba waxay ...
Hel muuqaalka Chuck Bass
Ma jecli taxanahan telefishan gabi ahaanba, laakiin waxaan jecelahay inaan arko muuqaalada uu jilayo jilaaga caanka ah ee Chuck ...
T-shaati Inditex: ku soo noqo carruurnimada
Dukaammada kooxda 'Inditex group' ayaa na siiya xilligan dib ugu soo noqoshada carruurnimada. Jiilaalkan Jiid & Bear, Blanco, Zara iyo ...
Yaraynta jellada caloosha
Waxaan aragnay dhawaanahan in kareemada caloosha ee caloosha kujira ay bateen, laakiin runti ma u shaqeyn doonaan sida ay yiraahdaan? Ma noqon doonaan sidaa ...
Waxaan ku tusaynaa laba moodel oo aad u casri ah oo jilicsan oo ka socda Gucci si aad u xirto dayrtaan.
Kabaha ugu fiican ee socodka, Drifter Gv Mm by Asolo
Qaar ka mid ah kabaha buurta ee waaweyn si ay u awoodaan inay lugeeyaan socodka iyagoon ka welwelin cimilada.
Nike waxay soo bandhigeysaa kabaha Rafa Nadal
Halkan waxaan ku tusaynaa kabaha cusub ee Rafa Nadal u soo bandhigayo tartankiisa cusub ee teniska, Nike fiican oo raaxo leh oo qurux badan.
Suunka Xarkaha ee Asos
Halkan waxaa ku yaal soo jeedin ka geddisan oo ku saabsan suumanka xilligan gu'ga-Jiilaalka 2011. Wax walbaa laguma jiidi doono….
Waqtiga ugu wanaagsan ee la xiiro
Ragga badankood, xiirashada waa hawl maalmeed ka mid noqda ...
Jaakadaha leh suxulka El Ganso
Moodhadhka cusub ee El Ganso ayaa yimid, oo leh jaakadihii ugu dambeeyay ee joornaalada casaanka ama caddaanka ah, si ay ugu muuqdaan kuwo ka qurux badan sidii hore.
Dhidid, dhibaato ha u oggolaan
Dhididku ma waxay noqdeen dhibaato aadan aqoon sida wax looga qabto? Ogaanshaha inaan nahay dad dhidid badan had iyo jeer waxay naga dhigeysaa kuwo aan raaxo laheyn, ...
Caan caan ah sidoo kale dhidid
Wajiyadda sidoo kale loo yaqaan Chris Martin, Kevin Bacon, Antonio Banderas, Tom Cruise ama Javier Bardem, mar uun ayey bartooda ...
Tilmaamaha xirashada guud ahaan muuqaalka cad
Hadda oo ay kuleylka kuleylka, waxa ka fiican in la xiro muuqaal guud oo cad, tan waa inaad maskaxda ku haysaa inay ka wanaagsan tahay inaadan isticmaalin qalabka dahabka.
Flip flops by UGG, ee ugu raaxada badan ee soo maray cagahayga
Waan ogahay in markaan aqrino UGG dhamaanteen aan ka fikirno kabaha waaweyn ee cagaha ay xidhaan, asalka ama kudayashada, ...
Funaanad Gucci oo xidhan astaan
Quruxsan, sax? Waa tan mid ka mid ah soo-jeedimaha funaanada ee shirkadda Talyaaniga ee Gucci ee qiimaheeda ...
Kabaha Zara Loafers
Zara loafers si ay ugu xirtaan kuwa ugu dambeeya cagahaaga. Noqoshada moodada waxay muhiim u tahay inaad noqoto nin jilicsan.
Tiknoolajiyada ayaa gaarto qalabka. Tani waa kiiska saacadda basaasnimada quartz. Quirky laakiin runtii waa qabow. Aynu si fiican u baranno astaamaheeda.
El Ganso blazer oo leh jilbaha xusulka cas
Halkan waxaa ah soo jeedin si loo yareeyo halista halista buluugga buluugga ah ama in la dhammaystiro muuqaal dhiirrigelin ah ...
Muraayadaha muraayadaha Ferrari, ee ugu dambeeyay ee tagaya ugu dambeeya
Muraayadaha muraayadaha ee Ferrari-ka cusub, oo ah kii ugu dambeeyay ee taga kii ugu dambeeyay.
Calaamadaha fidinta ragga.
fidinta calaamadaha, bilicsanaanta, Karinta fudud, daryeelka shakhsiyeed, cuntada,
Oakley Holbrook VR46, waxaa qoray Valentino Rossi
Waxaan horeyba kuugu sii sheegnay toddobaadyo ka hor, duuliyaha Valentino Rossi wuxuu noqday safiirka cusub ee shirkadda ...
Afar khiyaano si loo hagaajiyo maqaarka wajiga
Daryeelka maqaarka wajiga way wanaagsan tahay, ogaanshaha waxyaalo sir ah oo kaa caawin doona inaad sidaas sameyso. Nin waliba wuxuu leeyahay nooc maqaar sidaa darteed waa inuu la qabsadaa.
Suunka Gucci oo leh suun alwaax ah
Caadi ahaan waxaan u baranay inaan aragno noocyada caadiga ah ee G-da ee Gucci ee qalinka, dahabka ama xitaa ...
Khamriga ugu qaalisan adduunka: limoncello qaali ah
Haddii aan horay u aragnay noocyo loogu talagalay kuwa ugu qanisan champagnes, whiskeys iyo xitaa biyaha macdanta, tani waa leexashada ...
Tiara ugu qaalisan adduunka
Waad ogtahay waxa ku-xigeenka aan u leenahay dahabka, gaar ahaan dheeman. Maanta waxaan dooneynay inaan ku biirno mid kale oo ka mid ah maniasyada caalamiga ah, ...
Timaha timaha loogu talagalay wiilasha leh timaha toosiya
Aad bay u badan tahay in la arko in wiilasha maanta ay daryeelaan timahooda isku mid, ama mararka qaarkood ...
Saacadda Labaad ee LED-ka
Saacadaha waa qalab siiya taabasho gaar ah kuwa iyaga xiran. Oo markan, saacadda binary waa tusaale aad u cad oo ka mid ah.
Mustang kabaha ragga
Nooca kabaha Mustang ayaa sidoo kale jira xagaaga, markaa waxaan soo qaadaneynaa aruurinta ay soo bandhigeyso astaanta xilligan xagaaga.
Sumo la buufin karo, Tababar iyo Dharka Kariyaha
Dharka la buufin karo, Dharka Sumo la buufin karo, Dharka Tababaraha la buufin karo, Dharka kuugga la buufin karo, Dharka la buufin karo, dharka qurxoon, dharka xiisaha badan, dharka ugu fiican
Montblanc iyo qalimaanta ugu qaalisan adduunka
Montblanc uma aysan sameynin oo keliya qalabka wax lagu qoro ee kuwa wax soo ururiya laakiin waxay u sameysay kuwa jecel raaxada muddo dheer….
Shaatiyada Hollister ayaa daboolan
Weligay sifiican ugama fahmin abuurista shirkada mareykanka ah ee Hollister, waxaana u maleynayaa sidoo kale walaalkeed ka weyn ...
Kabaha Sanadka 2011
Sida kabaha xagaaga, ma jiraan wax ka fiican xirashada kabaha kabaha. Ahaanshaha mid aad u deggan oo qabow, ...
Ku wareeji kombiyuutarka jilicsan ee qof walba rabo.
- ROLLTOP, kombiyuutar dabacsan, shaashad jilicsan,
Ma rabtaa inaad mooddo? Kadib isticmaal "Onitsuka Tiger"
Uma Thurman, jaalle Onitsuka Tiger, Onitsuka Tiger, wuxuu dilaa Bill, Quentin Tarantino, Onitsuka Tiger Mexico 66,
Saraawiil iyo rajabeeto, nacnac!
saraawiil, joornayaal, garaacis, surwaal nacnac, rajabeeto nacnac, boodh nacnac, rajabeeto nacnac, harqood nacnac, nigis nacnac ah, hadiyad saaxiibtiis
Dhir si loola dagaallamo qolofta
Ma leedahay cufan oo ma garanaysid sida loo baabi'iyo? Dhibaatadani waxay ka badnaan kartaa dhibaatada bilicsanaanta waxayna noqon kartaa ...
Maxaa la cunaa si loo hagaajiyo xiriirka galmada?
Hagaajinta tayada galmada
Soo Iibso Sneakers Winged Adidas
Maaddaama uu farshaxanyahan ka karti badan hibada go'aansaday inuu la shaqeeyo sumcad caan ah oo kabo ah, oo loo yaqaan Adidas, ...
Tuxedo, dharka rasmiga ah ee ragga
Jimicsiga jimicsiga ee lamaanahaaga (Qeybta II)
Sameynta dhaqdhaqaaqa jirka ee lammaanaha ayaa leh faa'iidooyin ka badan kaligood. Laba laba ayaa ka xiiso badan
Cadar, maxay muhiim u tahay?
Cadarku aad buu uga badan yahay uun udugga.
Talooyin ku saabsan isku shaandhaynta aan xanuun lahayn
Si kasta oo aad timaha uga saarto, fiiro gaar ah u yeelo talooyinka soosocda si timo bixinta aysan u noqon jirdil
Timaha ugu fiican ee ragga
Rag aad u tiro yar ayaa daryeela timahooda sida ay ugu qalanto kuna dhiiran inay badasho muuqaalkooda oo ay xitaa shanleystaan ​​timahooda ...
Qaamuuska qurxinta ragga (M)
Si aad u barato sida saxda ah ee aad naftaada u daryeesho, waxna kama fiicna inaad ka bilowdo aasaaska waxyaabaha la isku qurxiyo. Qaamuuskan qurxinta waxaad ku ...
Lacoste Sport Magnet muraayadaha indhaha
Shirkadda Lacoste waxay ballaarineysaa dalabkeeda muraayadaha iyadoo moodooyin cusub laga soo qaatay khadkeeda 'Sport Magnet'. Hadda gugaas waa ...
Dahabka Swarovski ee ragga
Swarovski shaki la'aan waa mid kamid ah shirkadaha dahabka ugu caansan adduunka waxayna laxiriiraan dumarka ...
Jacaylka Iftiinka, kondhomka mugdiga ka ifaya.
Haddii aad raadineyso inaad ka yaabiso gabadhaada ama aad waqti fiican hesho, Nalalka Habeenku waa ikhtiyaarka ugu fiican. Kuwani…
Kabaha Ragga: Talooyin
Imaatinka xilliga ugu qabow sanadka, tani waxay sidoo kale nagu qasbeysaa inaan dejino nooc kale ...
Ragga midabbada timaha
Maqaalkani wuxuu tixraacayaa noocyada kala duwan ee tinctures ragga ee suuqa ku jira.
Muraayadaha indhaha ee John Richmond
Muraayadaha balaastigga ah ayaa noqday mid ka mid ah isbeddellada xiddigaha xilligan, iyo in ka badan haddii ...
Laredo de Tumi ururinta, maqaar
Mid ka mid ah tartammada xilligan dayrta-jiilaalka ee shirkadda Tumi ayaa ah ururinta Laredo, soo jeedin loogu talagalay ...
Shaati Zara oo daabac shabeel wata
Zara waxay mar hore qaadatay waqti dheer si ay ugu qanciso daabacaadda shabeelka ku jira aruurinta ragga ... Maalintii kale ee ...
Makiinada korontada ku shaqeysa iyo xumbada xiirashada ayaa hadda isla jaan qaadaya
Dooda weligeed ah ee ka dhexeysa mandiil koronto iyo mandiil. Ragga raadinaya hab deg deg ah iyo ...
Sidee loo hubiyaa qalliinka nuugayaasha?
Gawaarida naxdinta leh ee gaariga waxay ku yaalliin giraangiraha waxayna u adeegaan barkinta (sida ...
Qaab kale oo hufan, oo ka socda Super
Shirkadda muraayadaha iyo muraayadaha indhaha ee 'Super', oo leh qaab aad u xiiso badan, habka, waxay leedahay ...
Meelaha Cad ee Warby Parker Vintage
Marka lagu daro raadinta dhammaan madow madow in muddo ah (sidii aan marar badan ku celceliyay ugu dambeysay ...
Sidee loo shanleeyaa taabashadaada
Waxaan u maleynayaa in dhammaan kuwa xiiseynaya ay horeyba u tageen timo jaraha, ka dib markay aqriyaan sida loo jaro timahooda si ay u xirtaan ...
Sida loo jaro timahaaga si loo xirto taabasho
Waqtigan xaadirka ah way ka cadahay in isbeddelka ugu xoogan ee loo xiro madaxeena uu yahay taabashada. Badan…
Sneakers ugu badan ee Converse
Waxaan horeyba uheysanay aruurinta saxiixa cusub ee Converse ee dukaamada xilligan dayrta-jiilaalka 2010-2011. Mid ka mid ah ...
Sidee loo rakibaa meel aamin ah?
Amni darrada jirta awgeed, qoysas badan ayaa go'aansaday inay guryahooda ku aaminaan, si ay u awoodaan inay keydsadaan walxaha qiimaha leh ...
Persol ama Ray-Ban? Adiga ayaa dooranaya
Maanta arrimuhu waxay ku saabsan yihiin muraayadaha indhaha, gaar ahaan laba moodel oo caan ah oo ka kala socda laba nooc oo taariikhi ah. Wixii…
Bootooyinka Rockport ee Barbour
Shirkada Barbour, oo caan ku ah jaakadaha ay isku qaab yihiin Belstaff, ayaa sidoo kale sharad ku gali doonta ...
Kabo cusub oo Vespa iyo Adidas ah
Shirkadda Adidas waxay sii waddaa wadashaqeyn guul leh oo ay la yeelato nooca mootada Vespa oo ay la socoto ururinta cusub ee xilligan ...
Daabacaadda Marlon Brando Limited Edition, ee uu qoray Schott-NYC
Sanadihii 20-meeyadii, iyo fikradda ah in la abuuro jaakad shaqeynaysa si mooto loogu socdo, soo saaraha Irving ...
Poncho for cowboys, waxaa qoray Zara
Hada qaado. Mid ayaa raadinaya wax xiiso leh oo xusid mudan iyada oo loo marayo kaydka khadka tooska ah ee Zara si looga faalloodo barta ...
Qoyaan caano jirka Aloe Vera Deliplús
Adduunyada waxyaabaha la isku qurxiyo, wax walba ma noqonayaan kuwa heer sare ah sida Biotherm Homme ama magac "caadi ah" sida ...
Zara Homewear Fall-Jiilaal 2010-2011
Runtu waxay tahay inaan ogaaday in Zara ay sidoo kale iibisay bajamas markii ugu horeysay ee aan galo dukaankooda internetka, laakiin ...
Tabaha si sax ah loo barafeeyo
Haddii maalin uun aad karin lahayd usbuuca oo dhan oo aad haysato qaboojiye, waxa ugu habboon ayaa ah ...
Macy wuxuu ka furayaa dukaanka internetka Spain
Shabakadda ayaa hadda ah guddi ciyaarta oo shirkadaha moodada ay kula dagaallamaan duel….
Imisa jeer ayey kugu dhacday in daaqaduhu ceeryaamaan oo aadan aqoon sida looga dhigo kuwa muuqda? Ilaa…
Muraayadaha Muraayadaha Mykita
Hagaag haa, jaangooyooyin kale oo ku jira liiska dheer ee aan horay ugu aragnay halkan. Waxay ku saabsan tahay cusub ...
Bacda Jirdhiska Herschel
Waxaan dareemayaa daciifnimo, sidaan horeyba ugu sheegay munaasabadda, boorsooyinka ama boorsooyinka noocan ah, iyo mid ka mid ah ...
T-shaati gaboobay sida caadiga ah, waxaa leh HE by Mango
Maxaad u sugeysaa funaanad inay gabowdo, adigoo awoodi kara inaad iibsato mar horeba si toos ah ayaa loo jajabiyaa? Wax sidan oo kale ah…
Nomasculoblanco, dharka dabbaasha ee qorraxdu dhaafto
Kani waa magaca shirkadda suuqgeyn doonta dharka lagu dabaasho ee dhulka qaranka. Dabcan, boos uma bannaana ...
David Bowie funaanado ka socda Zara
Zara ayaa hadda bilowday, khadkeeda Casual, khad funaanado ah oo uu ku jilayo David Bowie. A…
Zara mise H&M? Adiga ayaa dooranaya
Maanta arrimuhu waxay ku saabsan yihiin dukaamada qiimaha jaban, gaar ahaan laba ka mid ah kuwa ugu waaweyn; Zara, hantida ugu weyn ee boqortooyada ...
Harmont & Blaine waxay dukaan ka furatay Madrid
In yar, shirkadaha moodada ayaa dib ula soo noqday kalsoonidii ay ku qabeen waddankeenna sidii suuq ay u soo saaraan wax soo saarkooda, isbeddel ...
Loafers ama kabaha doonta? Adiga ayaa dooranaya
Waxaan horeyba uga daalnay maqalka in nautical ay noqon doonto mid ka mid ah isbedelada ugu xoogan xagaagan, ...
Sidee shaqo looga raadsadaa internetka?
Kahor shaqo raadinta, waxay ka koobneyd u muuqashada xayeysiis ka soo muuqday wargeyska ama ku talinta a ...
Kilkilooyinka la xiiray, haa mise maya?
Xagaagu si aan gabbasho lahayn ayuu u soo dhowaanayaa. Maalin kasta way sii kululaataa (ugu yaraan halkan Valencia) iyo mid ka mid ah ...
Waxyaabaha cusub ee loo yaqaan 'Timberland' ee xilligan gu'ga-xagaaga waxaan ka helnay 'Aventura' aruurinta, oo magaceeda jecel ...
Waa inaan qirto taas, hal shay ama mid kale (qaddarin shaqsiyadeed iyo xiriirro jacayl-nacayb ah oo ku aaddan astaanta, gebi ahaanba shakhsiyan sidoo kale ...
Jeremy Scott iyo aruurinta taariikhdiisii ​​hore
Waxaan aragnay bilooyin nagu filan sannadkan gu'ga-xagaaga ururinta naqshadeeye weyn oo magaciisu yahay Jeremy Scott oo ay dhiirrigelisay ...
Sidee loo dhigtaa dhowr dhaqdhaqaaq?
Intii gaariga la dhiganayay wuxuu noqon karaa mid ka mid ah xaaladaha ugu walaaca badan ee darawal aan khibrad lahayn, hal mar…
BAPE waxay ufureysaa dukaankooda qadka tooska ah Yurub
Shirkada Jabbaan ee A Bathing Ape, oo loo yaqaan 'BAPE', ayaa hada dukaankeeda internetka ka furtay qaarada Yurub….
Tilmaamaha isku-darka garbasaarka
Waxaan ku jirnaa bartamaha xilliga qaboobaha ee Yurub iyo shalmadu waa qalab aasaasi ah oo haddii aan ogaanno sida loo isticmaalo aan ahayn oo keliya ...
Noocyada kala duwan ee cagaha
Mar kasta oo aan iibsanno kabo, waa inaan maanka ku haynaa inay jiraan noocyo kala duwan oo lug ah oo lug ah, iyo in sida ...
Talooyin ku saabsan jarista gadhkaaga
Hadaad jeceshahay inaad gadhka yeesho, waa inaad markasta ilaalisaa oo aad uxirnaataa si aad aragti fiican ugahesho ...
Muraayadaha barafka ee Gucci
Waxay u muuqataa in noocyada raaxada ay dhawaan ka faa'iideysteen suuqa ciyaaraha jiilaalka;…
Gillette xiirista gaarka ah
Haddii aad weli ka fekereyso liiska hadiyadaha Kirismaska, maanta waxaan soo jeedineynaa fikrad cusub oo loogu talagalay ...
Udgoonyada ugu fiican sida ku cad Akadeemiyada Barafuunka
Maalmo ka hor, Akadeemiyada Barafuunka waxay ku qabatay magaalada Madrid xaflad si ay u bixiso abaalmarinta lagu abaalmariyo ...
Fred Perry Foosto Foosto
Fred Perry maahan sumcad iga farxisa, laakiin waa inaan qiraa in waqti ka waqti uu iga yaabinayo ...
HE by jaakada Mango Europe
Anigu ma ihi macmiil joogto ah Homini Emerito ama HE, Mango's line (fiican, mid joogto ah iyo mid goos goos ah toona, kaliya ...
Ray Ban Wayfarer daabacaad kooban
Nooca muraayadaha indhaha ee xilli-ciyaareedka, halyeeyga Ray-Ban Wayfarer, ayaa hadda lagu soo bandhigay ururinta cusub ...
Sidee loo labistaa haddii aad caato tahay?
Isku mid maahan inaad ahaato mid dhuuban, adag ama cayilan, sidaas darteed waa muhiim in la ogaado dharka la xidhayo sida ...
Sidee loo isticmaalaa mashiinka dharka lagu dhaqo?
Rag badan oo kaligood taga inay kaligood noolaadaan waxay la kulmaan dhibaatooyin badan maadaama aysan raaxada u helin ...
Roob cusub oo la qaadan karo oo loogu talagalay kaamamka
Gudaha Hombres Con Estilo waxaan sii wadeynaa inaan ugu wargalinno aqristayaasheena wax ku saabsan alifaadkii ugu dambeeyay ee kaamamka iyadoo ujeedadu tahay ...
Louis Vuitton saacadaha haysta
Adduun weynaha Louis Vuitton wuxuu u abuuray inta badan socotada, waxaan ka helnaa xariiq qalab ...
Adidaskayga: habeeyo kabahaaga
Shirkada isboortiga ee Adidas waxay ku siineysaa suurtogalnimada inaad kabahaaga u qaabeyso qaab shaqsiyeed, abuurista ugu badan ...
Louis Vuitton Cadayn
Maalmo ka hor waxaan u turay Louis Vuitton anigoo ujeedkeedu yahay inaan helo muraayadaha indhaha, gaar ahaan ...
Suunka ugu qaalisan aduunka, Gucci
Naqshadeeye Stuart Hughes, oo ka tirsan Goldstriker International, ayaa caan ku ah asal ahaan daboolida wax kasta oo ...
COS, H&M nooca ugu khaaska ah, ayaa furaya dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee Isbaanish ah
Waxaan horeyba kuugu sheegnay dhowr bilood kahor, COS (Ururinta Qaabka), H & M nooca ugu raaxada badan, wuxuu ku saabsanaa ...
BarGoGo Transformer, dhalooyinka raaxada
Mararka qaarkood waxaan arkaa walxo ay igu adag tahay inaan aamino inay iyagu ikhtiraaceen, sida ku dhacday xaaladdan cajiibka ah ...
Waqtiga Xoogga Rafa Nadal daabacaad kooban
Sida Pau Gasol iyo Elsa Pataki, danjirayaasha astaanta Time Force, ciyaaryahanka tennis-ka Rafa Nadal wuxuu leeyahay his
Talooyin ku xiira mashiin koronto
Xiirashada waa wax ay tahay in raggu sameeyo ugu yaraan 3 jeer usbuucii. Hadaad rabto inaad ogaato waxa ...
Sidee looga guuleystaa haweeney xishood badan?
Sida ay jiraan rag xishood badan, sidoo kale waxaa jira dumar xishood badan. Gabadha xishoodka badan, ee jawaabta yar bixisa laakiin waxay umuuqataa inay rabto ...
Sidee looga dhigayaa batteriga gaariga inuu sii dheeraado?
Si aad batteriga gaarigaaga uga dhigto mid waqti dheer soconaya, sirta weyn ayaa ah in si sax ah looga shaqeeyo oo ...
Muuqaalku wuxuu inoo sheegayaa waxyaabo badan, gaar ahaan markay tahay rabitaanka gabadha. Taasi waa sababta Ragga ...
Goor dhow marka loo eego, shineemooyinka 3D waxay noqdeen kuwo moodada ah. Hadaad tagto shineemooyinkaas, waxay ...
Talooyin ku saabsan rinjiga qolkaaga
Ma waxaad ka daashay caddaankii ama midabkii aad sannado badan ku lahayd gidaarada qolkaaga? Ma kula tahay taas…
Uruurinta koofiyadaha mootada ee Rafa Armero
Dad aad u tiro badan ayaa dooranaya inay ku deeqaan koofiyad casri ah oo loogu talagalay wadista mootada. Koofiyadaha ...
F1 qaaska ah ee Valencia: Paella iyo horchata
Waxaan ka soo hadalnay makhaayado, dukaamo ... hadda waa inaan ka hadalno mowduucyo; paella iyo horchata, oo ah gastronomy ayaa lagu soo koobay laba eray. Maaha…
F1 qaaska ah ee Valencia: Cunitaanka bartamaha
Haddii maalmo ka hor aan ku sii yaraanayay sahayda marka loo eego ragga labiskooda, ...
F1 Gaarka ah ee Valencia: Poeta Querol
Waxaan horeyba u magacaabay Calle Poeta Querol maalin ka dib wadada ka dib oo leh dukaamada ugu raaxada badan Valencia. Wanaagsan ...
Aqoonsadaan oo baabi'iyaan buuqa ku dhex jira gaariga
Waxaad ku dhex socotaa gaariga si lama filaan ah waxaad u bilaabaneysaa inaad qeylo ka dhex maqasho gudaha. Haddii tan kugu dhacdo, ...
F1 Gaarka ah ee Valencia: Ka adeegashada bartamaha
Valencia caan kuma ahan dukaamada dharka lagu iibiyo ee ragga, oo ka fog, laakiin waxaa jira ...
Sidee loo ururiyaa shandad?
Hadaad safar aadayso oo aadan haysan cid boorsadaada kuu soo xirxirta ... waa inaad waxbartid ...
Sidee looga guuleystaa fasalka?
Waa maxay ardayga labka ah ee aan hal mar soo jiidanin saaxiibkiis, haddii ay tahay iskuulka ...
Warqad ama Bidet?
Waa inay noqotaa mid ka mid ah su'aalaha waaweyn ee taariikhda aadanaha. Shakhsiyan aad ayaan u necbahay dadka ...
CR7, saxiixa Cristiano Ronaldo
Dhamaan taageerayaashaas doonaya inay u labistaan ​​sida Cristiano Ronaldo, waxaad heysataa wax aad u fudud mahadsanidiisa nooca casriga ah ee CR7, ...
Furayaasha xulashada laptop-ka
Labada buugaagta wax lagu qoro, netbook, laptop-yada ama taleefannada super-ka iyo sidoo kale PDA-yada ama iphone-ka ayaa wax na siiya ...
Sidee loo abuuraa majaajilladaada?
Haddii aad tahay qof jecel majaajillada, waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo sheekadaada adoo dooranaya dejinta, jilayaasha iyo wadahadallada ...
Xagee lagu tuuraa shaxanka?
Sida nin waxbartay, waxaa aad muhiim u ah in la barto isticmaalka shaar noocan ah, maadaama mar la adeegsaday oo la tuuray ...
Boorsooyinka Louis Vuitton ee Deyrta / Jiilaalka
The Louis Vuitton boorsada ragga ee xilliga dayrta / jiilaalka oo ay dhiirrigelisay "
Sidee looga fogaadaa halista dabka gaarigaaga?
Burbur, rogaal celin, cilad farsamo ama koronto ayaa sababi kara in qeyb ka mid ah gaarigaaga uu dab qabsado….
Williot & El Ganso ... Isku ekaanshaha Macquulka ah
Maxaa markii hore soo baxay, digaagga mise ukunta? Haddii ay ahayd inaan ku dabaqno su'aashan noocyada aan soo jeedineyno ...
Farsamooyinka timaha lagu qalajiyo
Ragga qaarkiis waxay la ildaran yihiin dhibaatada aan aqoon sida loo qalajiyo timahooda, sababtoo ah weligeen ma baranin sida loo sameeyo ama ...
Abercrombie & Fitch waxaa la dhihi karaa waxay noqdeen nooc caan ka ah Spain Spain
Bikkembergs, kabo heer sare ah (II)
Haddii shalay aan ka wada hadalnay Munich inay tahay ikhtiyaar wanaagsan marka ay tahay inaad gasho kabaha qaar adigoon fasalka lumin, maanta ...
COOGI, maaliyado loogu talagalay nadiifiyeyaasha
Markaad aragto funaanadda sawirka, qaar badan ayaa maskaxda ku hayn doona sheekada quraafaadka ah ee Bill Cosby, oo ah sheeko majaajilo ...
Sidee loo barto kubbadda cagta?
Ma jiraan wax haween ah oo jecel in ka badan inay arkaan nin xukumaya kubbadda cagta
Ku sharad koofiyadaha iyo koofiyadaha xilli ciyaareedkan
Koofiyadu waxay ku jiraan moodal. Sabab kastoo aad u qariso madaxaaga hoostooda (waa wax xun ...
Ururinta cusub ee qalabka Emporio Armani
Shirkada sharafta leh ee Empori Armani waxay soo bandhigeysaa xilligan xagaaga ee 2009 qalab iyo qalab cusub, sida ...
Sidee looga fogaadaa dhididka xad dhaafka ah?
Rag badan ayaa la ildaran dhidid fara badan. Tani waa dhibaato maqaarka ah oo haddii aan lagu daaweyn waqtigeeda ay kasii dari karto wax kasta ...
Erayada loogu hadlayo Ingiriisiga baarka
Ingiriisigu waa luqadda caalamiga ah haddii aad u safreyso Mareykanka ama waddan kale ...
Talooyin ku saabsan nadiifinta kabahaaga
Waxaa jira xeelado badan oo lagu ilaaliyo maqaarkaaga, suede ama kabaha suede xaalada ugu wanaagsan ee suuragalka ah ...
Ma rabtaa inaad noqotid ilaaliye?
Immisa sheeko ayaan ka ognahay dabeecadaha astaamahan gaarka ah ee xaqiiqadeenna. Horeba shineemada, waa la sameeyay ...
Tilmaamaha moodada ee ragga culus
Waxa kaliya ee aan ugu tala galnay waa inaan siino taxane talooyin ah ragga culeyska badan, in kasta oo cunto yari ...
Sida looga fogaado timo daadashada xagaaga
Si kasta oo ay ragga bidaarta leh u egyihiin, oo aad u kacsi badan waxay noola muuqdaan gabdhaheenna, ninna uma ...
Xidh clip, haa ama maya?
Toddobaatameeyadii waxay ka mid ahayd waxyaabaha aasaasiga u ah qurxinta ragga. Imaatinka isbeddellada cusub kadib ...
Xadhig ama xir suunka
Qaanso-xirku waa kaabis ay dad badani qabaan waali. Aqlabiyad badan ayaa u maleyneysa in isku aadka uu badan ...
Noocyo kala duwan oo lagu xiro maro
Meesha aan ku noolahay, maalmihii qabowgu way bilaabmayaan, markaa wakhti kasta waxay ku habboonaan doontaa in lagu xidho shaar ...
Culotte, Thong ama Panties? Maxaan door bidnaa
Dumarku badanaa waxay u isticmaalaan dharka hoosta si ay noo sasabtaan. Waxaa jira noocyo badan oo ah dharka hoosta dumarku ka gashadaan: saraawiisha, kabadhka ama toogayaasha. Marka ...
Bikini ugu qaalisan aduunka
Naqshadeynta Susan Rosen, midkaan aan ku tusineyno waa bikininka ugu qaalisan adduunka, oo lagu qiimeeyo 30 ...
Tilmaamaha lagu daaweeyo stye
Stye waxaa sababa infekshinka qanjidhada ku yaal cirifka indhaha oo u dhow ...
Sidee loo sameeyaa isbeddelka saliidda?
Saliida mishiinka iyo miiraheeda waa in lagu badalaa mudada lagu soo qaatay buuga dayactirka gaariga….
Sideen uga takhalusaa wejigayga hurdada?
Mararka qaarkood markaan soo tooso subaxa waxaan dareemaa inaanan awoodin inaan qaado maalin caadi ah. Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad ...
Dockers ayaa sharad ku dhigta xilliga gu'ga "guridda"
Shirkadda Dockers waxay ku ballaarineysaa dalabkeeda soo-jeedinta guga iyadoo la taabanayo isbeddel iyadoo mar walba la ilaalinayo nuxurka ...
Sidee loo dhigaa shandad jeebka suudka ah?
Haddii ay tahay in la cusbooneysiiyo dacwad ama in laga dhigo xitaa mid rasmi ah, rag badan ayaa u muuqda in ay marsadaan dharka ...
Saraawiil cufan, oo aan kufaraxsanayn.
Dumarku way ku farxeen moodada surwaalka maqaarka ah ee ragga dhexdooda, hadda waxay calaamadeeyeen isla sidii aan haysannay ...
Foomka Tag Heuer 1 Indy 500, daawashada waxqabadka sare
Sida qaybta ugu sareysa ee gawaarida, halkaasoo dalabaadka ay aad u daranyihiin dhaqdhaqaaq walbana uu u baahan yahay saxsanaansho buuxda, ...
Sidee looga falceliyaa haddii baarashuudkeenu aanu furin?
Xirfad-yaqaan sare oo cirka ka shaqeeya ayaa sheegaya sida ku-dhaqanka isboortigaan ku bilaabmay. "Waxaan sameyn jiray isboorti cirka, iyo hal mar waxaan I
SK-II ee Isbaanishka, ugu dambeeyay qurxinta raaxada
Ugu dambeyntiina, tijaabinta alaabada shirkadda SK-II waa suurtagal gudaha Spain. Shirkadan cusub ee Jabbaan ayaa timid shirkadeena ...
Shaatiyada leh qoorta iyo koofiyadaha ka soo horjeeda
Dhamaanteen waan la yaabnay dhowr xilli ka hor shaararka midabbada leh iyo kuwa qaabaysan laakiin koofiyadooda iyo silsiladahooda ...
Goorma ayaa la qabanayaa isku dheelitirka iyo dheelitirka gaarigaaga?
Waxaa dhici karta in gaariga uu “dhinac u socdo” ama taayirka “uu xirto” si aan dheelitirnayn. Taasi way dhacdaa, ...
Daawada tigidhada, iyadoo bidaar leh
Haweeney ahaan waxaan ka dhiibanayaa ra'yigayga ku saabsan waxyaabaha soo gala ee ragga ka dhiga kuwa aan faraxsaneyn. Runtu waa…
Cristiano Ronaldo oo timo jaraya
Maanta waxaan idiin soo gudbineynaa timo jarista Cristiano Ronaldo. In kasta oo aysan ahayn horudhaca qaar, haddii ay tahay ...
AX Maydhashada Saliid
Shakhsiyan, waxaan aaminsanahay in AX-carfayaashu ay waxyeello u geystaan ​​kilkilaha iyo macaamiishooda sababtoo ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin ...
Hadiyado ku habboon taageerayaasha baabuurta
Haddii aad tahay nin ama naag, marar badan ma garanaysid hadiyado aad u samaynaysid munaasabad kasta. Kuwaas…
Dharka ragga ayaa sii wadaya inuu noqdo xanaaq
Maanta waxaan soo bandhigeynaa gogoshaan Utilikilt-ka ah oo ka sameysan suuf-poly taasoo ka dhigeysa mid jilicsan oo adkeysi leh.
Kuwa leh gaari wata isteerinka hawo-socodka waxay leeyihiin dareen ah inay awood u leexan karaan isteerinka "hal far." Laakiin…
Qaabka Talyaani ee tartanka adag ee qaabka Faransiiska
Dhamaanteen waan ognahay in qaabka dadka dariiqa ah ee Faransiiska, Talyaaniga ama New York ay tahay mid gaar ah, ama ...
Wax ka baro maraakiibta qaab ahaan!
Ninka casriga ah waa inuu wax ka ogaadaa waxyaabaha aasaasiga ah ee doomaha, sida ay u kala soocayaan iyo eraybixintooda. Haddii ay jirto maya ...
Cusub 17 "MacBook Pro
Batariga cusub ee 17-inch ah ee loo yaqaan 'MacBook Pro' wuxuu soconayaa ilaa 8 saacadood isla hal mar waana la buuxin karaa ...
Sidee loo sameeyaa shabaggeedii?
Amni darrada maanta ka jirta dunida waa wax maalin walba dhaca. Dhaca joogtada ah ee maalin walba dhaca ayaa ...
Sidee loo dayactiraa kursi caag ah?
Kuraasta balaastigga ah ama jardiinooyinka ayaa u muuqda kuwo gaboobay waqti kadib Fadhiga joogtada ah ee saaran iyo ...
Talooyin ku saabsan xiirashada qumman (II)
Maqaalkii hore ee ku saabsan sida loo helo xiirashada saxda ah waxaan ka soo hadalnay marxaladda ka hor xiirashada, waxa aan ugu yeerno ...
Tattoos wuxuu ahaa dhaqan Eurasia waqtiyadii Neolithic, xitaa laga helay qaar ka mid ah muusiikyada oo jira ilaa 6.000 ...
Tabaha xiirashada ugu fiican (I)
Hawl maalmeedkeenna caadiga ah wuxuu qariyaa wax aan la garanayn oo aan dhammaanteen u malayno inaan xakameyno: xiirashada Waan tagi doonaa…
Goose waa dacas moodada
Waxaan garwaaqsaday in waayadan dambe ay adagtahay in magaalada lagu dhex wareego iyadoo aan la arkin wiil qaba ...
Haddii aad leedahay dhibaatooyin finan ama finan, wax ka fiican tufaaxa ama wax kasta oo ka hortagga jirka ah si aad uga fogaato dhibcahaas dhibta leh ...
Saliida horay loo xiiro, maxaad u isticmaashaa?
Khasab maahan, laakiin isticmaalka saliida hore ee xiirashada ayaa ka badan inta lagu taliyay haddii aad ku xanuunsato markaad xiiraysid, ama ...
Daaweynta si loo balaariyo xubinta taranka, ma shaqeeyaan?
Maanta farsamooyin iyo jimicsi fara badan oo lagu weyneynayo guska ayaa laga yaqaan internetka iyo ...
Sidee loola macaamilaa haweeney xanaaqsan?
Waxaa laga yaabaa inaad noloshaada oo dhan la kulantay naag oo aadan aqoon sida loo maareeyo ...
Si cad ayaa loo qaaday. Waxaan mar hore cudur daar u leenahay inaanan xiirin gadhkaas saddexda maalmood ah ee waxyeellada badan ugaystay beri hore….
Ragga Qaabka iyo Awoodda: Warren Buffett
Warren Buffett waa ninka labaad ee dunida ugu taajirsan, hantidiisu waa 62 bilyan oo doolar. Dhashay…
IPod-ka waxaa la alifay 1979
British Kane Kramer wuxuu ahaa naqshadeeyaha asalka ah ee ipod. Saaxiibkiis Kramer wuxuu sameeyay aalad 1979 loo yaqaan ...
Server: Eeg Server. Xidigaha Xidigaha Xidigaha Xidigaha Xidigaha Xidigaha: Xidigaha Xidigaha ama muuqaalka xidigaha, node-yada waxay kasoo baxaan ...
Raggaas oo dhan oo guryahooda ka maqnaada inta badan maalinta oo aan dib dambe u diidin a ...
Qaamuuska kumbuyuutarka (PQR)
Lamaane qalloocan: Fiilo la mid ah lammaanaha taleefanka ee caadiga ah, oo ka kooban laba fiilooyin dahaaran oo «qalloocan» wadajira oo isku duuban ...
Ururinta cusub ee kabaha McLaren Sport
Mc Laren Sport wuxuu soo saaray kabo cusub oo aruurin ah, kuwaas oo sida muuqata loogu talagalay isboortiga mootada. Isku mid…
Maanta, HombresconEstilo.com, waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo guntilooyinka inta badan ay adeegsadaan ragga casriga ah. Waxay kala yihiin:
LAN: Shabakada Aaga Deegaanka ama shabakada deegaanka: Waa shabakad xiriir isgaarsiineed xog xaddidan, ...
Hacker: Waa qof aqoon weyn u leh nidaamyada kombiyuutarka. Xararad: Kombuyuutar yar oo ku filan in gacanta lagu hayo ...
Ragga ku jira sharabaadada 'lycra'
Waxaan aaminsanahay in qofkeenna uusan u maleynin in maalin uun aan xiraneyno sharaabaadyada 'lycra', laakiin maalintaas ayaa timid. The…
Qaamuuska Kumbuyuutarka (B)
Kaydinta: Muddada inta badan loo isticmaalo xisaabinta. Waxay loola jeedaa xaqiiqda abuuritaanka nuqul nuqul xog ah oo lagu marti qaaday ...
Talooyinka Amniga: Taayirada
Taayiradu waa meelaha kaliya ee ay isku xidhaan gaadhiga iyo dhulku. Waa in laga taxadaraa si loo ilaaliyo ...
Qaamuuska Kumbuyuutarka (A)
Si aad ugu caddeyso adduunka sayniska kombiyuutarka oo aadan u ekaan toto marka ay kaaala hadlayaan, ...
Dhibaatooyinka gaariga: Qiiqa tuubada qiiqa dheer
Haddii gaarigayagu qiiq ka baxayo qiiqa qiiqa ma ahan war wanaagsan, laakiin macnaheedu maahan inaad u baahan tahay ...
Sidee loo daryeelaa aaladaha kaydinta la qaadan karo?
1. Ka jar qalabka si sax ah markaad isticmaasho Ka dib markaad ku isticmaasho kombuyuutarka, waa inay ka go'aan xulashada ...
Xirmada sameynta dubitaanka
Ma jeceshahay inaad dubto Biir cusub, hilib iyo macmacaan barafaysan oo wanaagsan si aad uhesho qadadaada kadib ... sida ay u macaan tahay! Si…
Kabaha si aad u eegto dherer
Suuqa dhexdiisa kabaha qaar ayaa la soo baxay xeelad yar si ay nooga dhigto mid dhaadheer. Shirkadda Bugarri Shoes…
Koritaanka gadhka oo gaabis ah
Shirkadda qurxinta qurxinta ee Clinique waxay soo saartay khadad alaab ah oo loogu talagalay maqaarka ragga. Tani waxay u tarjumaysaa qurxinta ...
Seduction buluug, cadar loogu talagalay khiyaanooyinka dhashay
Jaleecyada xanafta leh, dhoolla-caddaynta og, buuq "aan ula kac ahayn"; ilaha la dhaqan geliyey waqtiga ka mid ahaanshaha ...
Kabaha Manolo Blahnik ee ragga
Manolo Blahnik wuxuu joojiyay sameynta kabaha ragga 7 sano ka hor, wuxuu xooga saaray moodellada dumarka ee ay jecelyihiin. La aan…
U xiiro sida mudane. Qeybta 1aad: Burushka
Qoraalada soo socda waxaan ku qori doonaa aaladaha iyo farsamooyinka lagama maarmaanka u ah in loo xiiro sida mudane. Bari…
Kareemka iyo saliidaha horay u xiir
In kasta oo aysan daruuri ahayn, kareemka hore ee xiirista ama saliidda ayaa si weyn loogu taliyay iyada oo qayb ka ah hawl maalmeedka ...